Itshe eliyigugu le-opal lomlilo - Isibuyekezo esisha 2021 - Ividiyo enhle
Incazelo yomlilo opal. Senza ubucwebe besiko ngamatshe asikiwe noma aluhlaza omlilo asethwe njengamacici, izindandatho, umgexo, isongo noma elengayo.
Thenga opal yemvelo esitolo sethu
I-opal yomlilo iyabonakala ku-opal eguquguqukayo, enemibala yomzimba efudumele ephuzi kuye kolintshi kuya kobomvu. Yize kungavamisile ukukhombisa noma yimuphi umdlalo wombala, kwesinye isikhathi itshe lizokhombisa ukukhanya okuluhlaza okukhanyayo. Umthombo odume kakhulu yisimo se Queretaro eMexico, lawa ma-opal ngokuvamile abizwa ngokuthi yi-Mexican fire opal
Amatshe aluhlaza angakhombisi ukudlala kombala kwesinye isikhathi abizwa ngama-jelly opals. Ama-opal aseMexico kwesinye isikhathi ayanqunywa kwimpahla yabo yokubamba i-rhyolitic uma kunzima ngokwanele ukuvumela ukusika nokupholisha. Lolu hlobo lwe-opal yaseMexico lubizwa nge-opera yeCantera. Futhi, uhlobo lwe-opal oluvela eMexico, olubizwa ngokuthi yi-opal yamanzi yaseMexico, yi-opal engenambala ekhombisa i-sheen yangaphakathi eluhlaza okwesibhakabhaka noma yegolide.
I-opal yomlilo evela eMexico
I-opal yomlilo omnyama
Incazelo yomlilo opal
I-opal yomlilo ngaphansi kwesibonakhulu
Yini eyenziwe nge-opal yomlilo?
Ingabe i-opal yomlilo iyabiza?
Uhlobo luni lwedwala opal fire?
Uyini umehluko phakathi kwe-opal ne-opal yomlilo?
Ngubani okufanele afake i-opal yomlilo?
IGirasol opal yigama kwesinye isikhathi elenziwa ngephutha nangokusetshenziswa ngokungafanele ukubhekisa etsheni lomlilo elingavuthiwe, kanye nohlobo olusobala lohlobo lwe-quartz yobisi oluncane oluvela eMadagascar olubonisa i-asterism, noma umphumela wenkanyezi, lapho isikwe kahle. Kodwa-ke, i-opera ye-girasol yangempela uhlobo lwe-hyalite opal ekhombisa ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka noma i-sheen elandela umthombo wokukhanya nxazonke.
Akuwona umdlalo wombala njengoba ubonakala ku-opal eyigugu, kepha kunalokho ungumphumela ovela kokufakwa okuncane kakhulu. Futhi kwesinye isikhathi kubhekiselwa kuyo njenge-opal yamanzi, futhi, uma ivela eMexico. Izindawo ezimbili eziphawuleka kakhulu zalolu hlobo lwe-opal yi-Oregon neMexico.
I-opal yasePeruvia ebizwa nangokuthi i-opal eluhlaza okwesibhakabhaka iyi-semi-opaque etsheni le-opaque eliluhlaza okwesibhakabhaka elitholakala ePeru, okuvame ukusikwa ukufaka i-matrix ematsheni e-opaque amaningi. Akukhombisi ukudlala kombala. I-opal eluhlaza okwesibhakabhaka nayo ivela e-Oregon esifundeni sase-Owyhee, naseNevada ezungeze iVirgin Valley, e-USA.
Akukho opal omnyama omnyama. Onke ama-opal amnyama a-opaque yingakho kungewona umqondo. Abantu abaningi nabathengisi bamatshe ayigugu (abangewona ama-gemologists) badidanise amagama amatshe noma banikeze igama elingalungile ngamatshe. Cishe bazama ukuchaza i-opal emnyama ngomdlalo wezimo zombala ebusweni.
Kuyigugu eliyigugu elinencazelo nezakhiwo zokuletha ubuntu bomnikazi. Njengoba igama libonisa, leli tshe eliyigugu lifanekisela "ilangabi" futhi linamandla amakhulu.
Ungawasebenzisa kahle amandla akho ngokushisa amandla akho. Kuhle ukuyisebenzisa lapho ufuna ukubona iphupho noma umgomo wakho.
Lakhiwe ekujuleni kwezintaba-mlilo zasendulo, itshe eliyigugu lenziwa lapho amanzi engena odakeni olunothe nge-silica, egcwalisa izingongolo nemigodi yalo. Ngaphansi kwalokhu kushisa nokucindezela okumangazayo, udaka lubamba amanzi ngaphakathi kwalo, lwenze lawa mathonsi anomlingo, akhanyayo elangeni.
Umbala obaluleke kakhulu ubomvu. Iwolintshi nephuzi kujwayelekile kakhulu futhi kushibhile, kepha la ma-hues asephakathi kokubiza kakhulu uma kuqhathaniswa neminye imibala ye-opal. Noma ngabe umbala unjani, lapho umbala wawo ushuba kakhulu, uyigugu ngokwengeziwe.
Kwisayensi ye-mineralogy, leli gem akuyona i-mineral, kodwa i-amorphous mineraloid. Lokhu kusho ukuthi empeleni ayiqukethe isakhiwo samakristalu njengoba kungaba yiminerali yangempela. Njengazo zonke ezinye izinhlobo ze-opal, Kungukuqongelelwa kwezinhlaka ezincane ze-silica.
I-opal i-opaque. Amacici we-opal yomlilo enziwa ngokusobala ku-opal eguquguqukayo, anemibala efudumele yomzimba ophuzi kuye ku-orange kuya kobomvu. Yize kungavamisile ukukhombisa noma yikuphi ukudlala kombala, kwesinye isikhathi itshe lizokhombisa ukukhanya okuluhlaza okukhanyayo.
Umuntu owazalwa enezimpawu zezinkanyezi iTaurus neLibra kufanele ayigqoke. Kunconywa kakhulu kothile, oneMahadasha noma u-Antardasha weVenus Shukra ku-horoscope. I-Opal izuzisa kakhulu abantu abaphethwe yinyumba, ukuphazamiseka kwezocansi, iLibido, nokungabi namandla.
I-opal yemvelo yemvelo iyathengiswa esitolo sethu
Senza ubucwebe besiko ngamatshe asikiwe noma aluhlaza omlilo asethwe njengamacici, izindandatho, umgexo, isongo noma elengayo ... Ngiyacela Xhumana nathi kwesilinganiso.
I-opal yomlilo 7.36 ct